Fanamboarana arina : mendrika ny tetikasa | NewsMada
Fanamboarana arina : mendrika ny tetikasa
Nibata ny loka goavana satria mendrika indrindra tamin’ny fifaninanana tetikasa mahomby iatrehana ny fiovan’ny toetr’ andro, Rakotonirina Nomenjanahary Zo. Mpianatra avy amin’ny Cisco Ifanadiana no nahazo ny laharana voalohany amin’ny tetikasa fanamboarana arina fandrehitra vita amin’ny tanimanga, tain’omby ary ampombo mahery. Nisafidy ireo akora ireo izy satria fahita amin’ny fiainana andavanandro ary ampiasaina betsaka amin’ny toerana maro, araka ny fanazavany, omaly, teny Anosy. Laharana faharoa, Ramahalaza Brian, avy any lycée Jacques Rabemananjara, Toamasina amin’ny tetikasa fanadiovana ny ranomasina mba hihena ny entona CO2 eny amin’ny tontolo iainana miteraka ny fiakaran’ny maripana eto amintsika. Hohaodina ho vokatra hafa ny fako hiarovana ny fahadiovan’ny tanàna. Fahatelo nomena fankasitrahana ny mpianatra, Razafimandimby Lionot, avy any amin’ny lycée Antaninarenina, Cisco Toliara I, nampiseho tetikasa fanamboarana fatana mitsitsy sy arina fandrehitra azo avy amin’ny tain’omby mba tsy hanapaka hazo betsaka intsony ny olona rehefa ahandro sakafo isan’andro.
Enina ny mpianatra avy amin’ny faritany enina nanao ny famaranana omaly, teny amin’ny foiben’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Hanome tohana ny minisitera sy ny orinasa Vivo Energy, tompon-kevitra sady mpanohana ny fifaninanana ho an’ny tetikasa mendrika mba hampiasaina hampandrosoana ny ady amin’ny fiovan’ny toetr’andro. Nitondra mody fahitalavitra écran plat, tablette Samsung ary fitaovam-pihainoana MP3 ilay mpianatra voalohany.
2 062 ny mpianatra avy amin’ny lycée 372 nandray anjara tamin’ny fifaninanana. 600 ny mpanabe nanohana ny mpianany nandritra ny fanatontosana ny tetikasa. Nahasarika ny mpianatra ny fifaninanana ary namoha ny fitiavany mikarokaroka, hoy ny tale jeneralin’ny Vivo Energy.